inyumoniya Focal - isifo esibonakala ngokuba uphawu wamaphaphu izicubu ukuvuvukala. Kuyinto isici ezihlukahlukene etiological, pathogenetic, izimpawu emtholampilo. Isici nobuntu isifo kunomkhawulo yamaphaphu ukuvuvukala, acinar noma ingxenye.
inyumoniya Focal ngokujayelekileko uba yini umphumela yezinkinga ezinye izifo (ngokwesibonelo, lapho igazi amile ku yokujikeleza kwegazi eliya emaphashini kwenzeka inyumoniya hypostatic) noma ezimele. Inqubo ukuthuthukiswa iqala ze- bronchi, ngakho-ke libizwa bronchopneumonia.
Lesi sifo libhekwa kuye ubukhulu foci ukuvuvukala. Ngokusho lokhu inyumoniya isimiso sehlukaniswe ebalulekile elincane, kanti esikhulu abakhwabanisi. Ngokuvamile inqubo itholakala ku lobules yamaphaphu endaweni ingxenye ethile. Kulokhu, izigaba evamile izicubu alternate nge sokugembula foci ukuvuvukala.
inyumoniya Lobular kwenzeka ngaphansi isenzo kwanoma iyiphi Amagciwane: Staphylococci, Streptococci, Pneumococci, Proteus, Legionella, E. coli, anaerobic bacterium, lenyama, mycoplasma, chlamydia, amagciwane.
Amagciwane ukungena wamaphaphu izicubu ngokuyinhloko bronchogenic. Hematogenous futhi lymphogenous indlela isici pneumonia yesibili, okuyinto izinkinga inkambo isimo ecashile sokugembula. Lokusakaza nezilwanyana ezincane wenziwa ngaphansi kwethonya izici ezingezinhle ukuthi ukunciphisa zokuzivikela umsebenzi bronchial uhlelo zokuzivikela. Lezi zihlanganisa hypothermia, ukubhema, ukucindezeleka, ephefumula of ezinobuthi.
Uhlamvu izinqubo ukuvuvukala incike izakhiwo agent ezithathelwanayo, degree of ukuphazamiseka kwegazi lesion, isimo lesi silwanyana.
inyumoniya Focal has isithombe variable emtholampilo. Lesi sifo ingaqala kancane kancane, acute. Kulo mBhalo, kukhona ukwanda kokutheleleka kudlange kakhulu lokushisa, Ukugodola. izikhalazo Elivamile iziguli ukukhwehlela, okungase ezomile, ezimanzi lapho kukhululwa nenani abalulekile isikhwehlela ukuba ubuhlungu besifuba, ukuphefumula okusheshayo, ubuthakathaka jikelele.
auscultation kanye eshaywayo: zindlela ezilandelayo wezinsimbi esetshenziselwa sitholakele isifo. Indlela yokuqala kukusiza ukuba ulalele ubunjalo emishinini yokuphefumula kanye nezinguquko kulo. Ephambi kwezinduna pneumonia oyingozi kunqunywa rales sonorous. Breathing ngaleyo ndlela uthola uhlamvu ezinzima. Lapho eshaywayo blunting izindawo ezikhonjwe, okuyinto kushintshane izindawo inyama ephilile. Ukubusa pleurisy kubangela ukubukeka pathologic pleural umsindo ukuhilizisana.
Ngo-laboratory izifundo kunqunywa ukwanda neutrophil egazini, okwandisa ESR.
pneumonia oyingozi ezidinga imithi yokwelashwa ngokushesha, ngoba ezindaweni eziningi wajoyina yezinkinga, okuvame ukuphumela ukuwohloka enkulu isimo sokusebenza. Ukwelashwa nokuvikelwa lesi sifo eziyinkimbinkimbi. Luhilela alwa toxemia futhi ukutheleleka, nokuqedwa nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula, ukubuyisela isitho umsebenzi, ukwandisa umzimba ozivikela. Kukhethwa imithi kusekelwe hhayi kuphela ubunjalo isifo eyisisekelo, kodwa futhi ku khona izimo co-okukhwantabalisayo.
izimiso ukwelashwa Basic zotshwala, phakathi okuyinto indima eliyisisekelo eyadlalwa antibiotic, imi kanje: ukuphazanyiswa uphethwe iqala, ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi uhlobo lwegciwane yakhiwa kusho spectrum ezibanzi yesenzo. Ngemva ukucaciswa etiology futhi ukucacisa ethize ejenti ezithathelwanayo cupping inyumoniya Uthola umbono kuyiwa. Wamisela ejenti ambalwa elwa namagciwane ukuthi babe izindlela ezifanayo isinyathelo futhi ayibanzi. Ukwelashwa bronchopneumonia nokukhetha esifike ngesikhathi futhi okunengqondo izidakamizwa liphela ngesikhathi kusho izinsuku eziyisikhombisa.
Namabala amhlophe emzimbeni
Kuphi futhi kanjani ukudlula fecal Iqanda worm: incazelo inqubo. fecal amaqanda worm: kanjani ukuthatha
Beaches Odessa, abadumile noma zasendle - imizwa emihle yibhange.
Biography Julia Proskuryakova: wesimanje Cinderella indaba
"Nesigcino indoda" - indaba Sholokhov. "I Ukudalelwa yomuntu": An Analysis
Indlela ukubeka i enema?
Indlela ukwelapha imvubelo ukutheleleka phakathi nenkathi yokukhulelwa?